राेचक  नेपाल भारत‍
श्रीलंकामा बेहुलीको साडी झन्डै साढे ३ किलोमिटर लामो, बोक्न २५० छात्रा प्रयोग
२०७४ असोज ८ गते १४:०७
एजेनसी, ८ असोज । विश्वमा चकित पार्ने धेरै घटना हुने गर्छन्। श्रीलंकाको केन्डी सहरमा भर्खरै यस्तै एउटा रोचक घटना भएको छ। केन्डीमा एक नवविवाहिता बेहुलीको साडीको लम्बाई नै ३ दशमलव २ किलोमिटर थियो। जसलाई सरकारी स्कुलका २ सय ५० जना छात्राले समातेका थिए। स्थानीय सञ्चारकर्मीले...
१ सय ६५ टन गोलभेंडा हानाहान, यसरी गरियो गोलभेंडा युद्ध (फोटोफिचर)
२०७४ भदौ १६ गते १९:४१
स्पेनमा वार्षिक गोलभेंडा युद्ध पर्व सम्पन्न भएको छ । भ्यालेन्सियाभन्दा २५ माइल पश्चिममा रहेको बुनोल सहरमा हरेक वर्ष अगष्ट महिनाको अन्तिम बुधबार ला टोम्याटिना नामक गोलभेंडा युद्ध पर्व मनाइन्छ । यो पटकको गोलभेंडा युद्ध पर्व चाहिँ विशेष रह्यो । किनकि यो गोलभेंडा लडाइँ पर्वले...
२०७४ भदौ १६ गते १९:२९
के धोखा दिनलाई पनि कुनै मुहुर्त हुन्छ ? के मानिसले कुनै दिन, बार, गते तथा तिथि हेरेर आफ्नो प्रियजनमाथि धोकाधडी गर्दछ ? कुन दिन कति बजे मानिसले आफ्नो पार्टनरमाथि बढि धोकाधडी गर्दछ ? वास्तवमा यो मान्छेको चरित्र, मौका आदिमा भर पर्दछ । एक डेटिङ...
१० हजार अण्डाबाट बनाइयो एक अमलेट
२०७४ भदौ ३ गते १८:५२
स्वयंसेवी तथा केही भान्छेहरु मिलेर एउटा यस्तो अमलेेट तयार पारे जसको स्वाद त केवल एउटा सहरले मात्रै चाख्न पायो तर चर्चा चाहीँ विश्वभर नै भयो । उक्त अमलेट १० हजार गोटा अण्डाबाट बनाइएको हो । बेल्जियमको मालमेडी सहरमा काठबाट बनाइएको भाँडोमा यो भिमकाय अण्डा...
हराएको हिराको औँठी १३ वर्षपछि गाजरमा भेटियो
२०७४ भदौ ३ गते १८:३७
क्यानडाको अल्बर्टाकी मेरी ग्राम्सको हिराको औँठी १३ वर्ष पहिले घरकै बगैँचामा हराएको थियो । त्यो सन् २००४ को कुरा थियो । अहिले मेरी ८४ वर्षकी छिन् । हराएको यति लामो समय हुुँदा समेत फेला नपरेपछि औँठी भेटिने आश उनले मारिसकेकी थिइन् । तर हालै...
२०७४ साउन २६ गते १८:५८
आठवटा खुट्टा भएको सुक्ष्म जीव टार्डिग्रेड्सको वंशाणु (जिन) को अध्ययनपश्चात उसको असाधारण क्षमताको पहिचान भएको छ । एक मिलिमिटर वा त्योभन्दा पनि सानो आकारको यो जीव विकिरणयुक्त क्षेत्र, अत्यधिक चिसो ठाउँ, खतरनाक सुख्खा ठाउँमा मात्र होइन, अन्तरीक्षणमा समेत बाँच्न सक्दछ भनिन्छ । शोधकर्ताहरुले यसका...
फेला पर्‍यो ८ किलोको च्याउ !
२०७४ साउन २६ गते १८:५२
एउटा नाथे च्याउको तौल कति होला र ? तर चीनमा भने पूरै ८ किलो तौलको च्याउ फेला परेको छ । चीनको युनान प्रान्तमा उक्त भिमकाय च्याउ भेटिएको हो । यो च्याउको वजन ८ किलो छ भने यसको छाताको परिधि १.८ मिटर रहेको छ ।...
२०७४ असार २५ गते १२:१२
आफूले पालेका सुगाहरुजस्तो देखिन वर्षौं लगाएर प्लाष्टिक सर्जरी गराएका एक व्यक्तिले एक कदम अगाडि बढेर आफ्नो नाम मिस्टर प्यारोटम्यानमा परिवर्तन गरेका छन् । ५८ वर्षीय टेड रिचर्ड आफूले पालेका सुगाहरु – एली, टियाका, टिम्नेह, जेक र बुबीप्रति यति आशक्त छन् कि उनले आफ्नो अनुहार...
मोटी गर्भवतीको रेकर्ड बनाउन मोनिका खान्छिन् ३० प्लेट चिकेन र एक जग आइसक्रिम
२०७४ जेठ ३१ गते १९:३०
जेन्सी– प्राय महिला गर्भावस्थामा यसकारण पौष्टिक आहार धेरै खान्छन् कि आफू र बच्चा स्वस्थ होस्। बच्चा जन्माउँदा कुनै समस्या आइनपरोस्। तर, अमेरिकाको टेक्सासकी एक महिला विश्व रेकर्डका लागि गर्भावस्थामा धेरै खाइरहेकी छिन्। तेस्रोपल्ट गर्भवती भएकी मोनिका रिले नामकी ती महिला चाहन्छिन्, गर्भावस्थामा सबैभन्दा मोटीको...
२०७४ जेठ २४ गते १८:०३
हामीमध्ये केहीले विमानमा यात्रा गरेका छौं । तर विमानसँग जोडिएका केही तथ्य यस्ता पनि छन् जसबारे सायद तपाईंलाई थाहा छैन । आउनुहोस्, यसबारे जानकारी लिऔंः आखिर विमानको रङ सेतो नै किन हुन्छ ? सेतो रङ लगाउँदा विमानको बडीमा आएको कुनै पनि खराबी जस्तै चिरा...
123 … 11 पछिल्ला »
उत्साहका साथ गोर्खा कप क्रिकेट प्रतियोगिता हुँदै
गोर्खा कप क्रिकेट २०१९ अब केही बेर पछि सुरु
आफन्तबाटै बेचिएकी सोनाली
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावाली भारत भ्रमणमा
समाचार सम्प्रेषण गरेको २४घन्टा नबित्दै बिद्धुत प्राधिकरणले गर्‍यो गलती सुधार
बिद्धुत प्राधिकरणको लापरबाहीले ४००भोल्टेजको खुल्लातार
टीकापुर न.पा वार्ड नम्बर १को युवा लक्षित एक महिने सवारी साधन चालक तालीममा वार्ड अध्यक्षको अनुगमन
निर्मला पन्त हत्या देखि फरार युवा काठमाडौ मा पक्राउ
सूर्यकान्त पौडेल, दिपा पौडेल पराजुली
मीना साँउद, दिपक भण्डारी